Somalia Way Aqoon Santahay Somalilnad Sababtuna Maxay Tahay.
Somalia Way Aqoon Santahay Somalilnad Sababtuna Maxay Tahay.
Thursday February 15, 2018 - 12:19:01 in by Samiir Cabdi
Somalia Way Aqoon Santahay Somalilnad Sababtuna Maxay Tahay. Haddaba Somaliland waxay xoriyadeedii Luntay la soo noqotay 1991 shirkii Burco ee beelaha waqooyi Waxayne isku raceen in ay la soo noqdaan
Labaddii Waddan ee Xoroowday 1960 waxaay Kala ahaayeen Somaliland iyo Somalia. Somaliland ayaa horaan xoroowday 26june 1960. Somalia ayaa ku xigtay 1july
Waxaayna la'baxeen Jamhuuriyadda Soomaalida (Somali republic).
Muddo 30 Soddon Sanno ah ayay ku Midaysnaayeen dowlada mid ah,Calan mid ah, Madaxweyne mid ah, iyo Lacag mid ah
Soddonkii Sanno ee dowladda Soomaaliyeed jirtay toban ka mid ah waxaa socday dagaal u dhaxeeya koonfur iyo waqooyi gaar ahaan jabhaddii Xaq u dirirka SNM iyo Xukuumaddii Kacaankii hagardaamo
Halgankaas oo dadka reer waqooyiga ugu kacay Naf
iyo Maal aan la soo koobi karin
Sidookale Xukuumaddii Kacaankii hagardaamo waxay ku wayday cududii militeri taas oo keen tay in ay meesha ka baxdo ugu danbayn
Haddaba Somaliland waxay xoriyadeedii Luntay la soo noqotay 1991 shirkii Burco ee beelaha waqooyi
Waxayne isku raceen in ay la soo noqdaan dowladii Lixdankii ay Xamar geeyeen waxaana la soo celiyay magacii hore ee Somaliland.
In kastoo ayna Somaliland aqoonsi buuxa caalamka ka helin haddana waxaay noqotay mucjiso ka soo baxday geeska afrika marka la eeggo nabadda,Dowladnimada shaqaysa, iyo dib u dhiska dalkeedii burburay.
Dhankooda walaalaha Somalia waxaa gacantooda ka baxay talladoodii iyo masiirkii ay dhaxalka u lahaayeen Waxaana gacanta ku dhigay walina ku haya masiirkii iyo mustaqbalkii Somalia oo hantiyay dowladdo shisheeye.
Waxaana Dalka dibadiisa iyo gudihiisaba lagu soo yagleelay dowlado gacan ku rimisa ah oo ay waardiyeeyaan ciidan shisheeye.
Dowladdaha taagta daran ee Magaalada Muqdisho ku Saqiira waxaa gacanta ku haya dowladdo shisheeye dhaqaala ahaan,siyaasad ahaan iyo amni ahaanba.
Sidookale Somalia waxaay si dadban u aqoonsi satay Somaliland Sababtoo ah waxaa meesha ka baxay wax kasta oo lagu Midaysnaa sida dastuurkii lixdankii iyo magacii Jamhuuriyadda Soomaalida. (Somali republic)
Inkastoo dadka reer waqooyiga diideen dastuurkii lixdankii haddana Waa wax keliya ee reer koonfureedku ku doodaan in u yahay xajada isu haysa Waxa loogu yeedho Midnimadda Soomaalinimada
Dastuurkaas oo hadda meesha ka baxay.
Waxayna somalia labaxday dowladda Faderaalka somalia oo ka Kooban lix dowlad goboleed oo ku jira xuduudii somalia Italian lixdankii. Wana puntland,jubaland,galmudug,hirshabeele,koonfur galbeed iyo dowladda dhexe ee Muqdisho.
Sidookale Nidaamka Faderaalka ah waxaa loo sameeyaa dadyoow ku Kala duwan dhaqanka,diinta,luuqada iyo isirka.
Haddaba waxaa halkaa ka soo baxaysa micnaha Faderaalka ee ay macaansadaan siyaasiyiinta Somalia
Oo ayna fahan sanayn cida Faderaal loo sameeyo.